अर्को महिनादेखि ११ वर्षमुनिका बालबालिकालाई कोभिडको भ्याक्सिन
२०७८ भदौ ३० बुधबार ०६:१८:००
बालबालिकालाई समेत कोभिड–१९ विरुद्धको भ्याक्सिन लगाइने भएको छ । पछिल्ला क्लिनिकल ट्रायलहरूले ५–११ वर्ष उमेर समूहमा पनि भ्याक्सिन लगाउन सकिने पुष्टि गरेपछि अक्टोबरको अन्त्यबाट भ्याक्सिन लगाउने तयारी भएको हो ।कोभिडविरुद्धको भ्याक्सिन अहिले १२ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा लगाइँदै आएको छ । कोभिड संक्रमण दर घट्न थालेसँगै विश्वभर नै विद्यालय खुल्न थालेका छन् । विद्यालय खुले पनि अभिभावकहरूमा भने त्रास कायम नै छ ।
अध्ययनहरूको यो निष्कर्षले भने उनीहरूमा केही खुसी गराएको छ । साथै ११ वर्षमुनिका बालबालिकामा पनि भ्याक्सिन लगाउन सुरु गरेपछि बालबालिकामा संक्रमणको जोखिम कम हुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
अमेरिकामा बालबालिकामा संक्रमण बढेसँगै विश्वभरि नै चिन्ताको विषय बनेको थियो । तेस्रो लहरको जोखिम बढेको भन्दै विज्ञहरू जोखिम न्युनीकरणमा लागेका थिए । यसैक्रममा अमेरिकामा दुईवटा वैज्ञानिकको समूहले गरेको अध्ययनले बालबालिकामा खोप प्रभावकारी हुने देखाएको हो । उनीहरूले खोप प्रयोगमा ल्याउन सकिने सुझाबसमेत दिएका छन् । ५ वर्षभन्दा माथिका बालबालिकामा दिइने भ्याक्सिनको डोजबारे भने मोर्डना र फाइजरले अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ ।
नेपालमा निकै समय लाग्छ : डा. पुन
केही विज्ञहरूले भने साना बालबालिकाको हकमा अझै अन्योल रहेको जनाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा पनि पुसदेखि माघ महिनासम्म १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका लागि भ्याक्सिन ल्याउने तयारी भइसकेको छ ।
सरकारले अमेरिकाबाट ६० लाख डोज भ्याक्स्नि ल्याउने तयारी गरिसकेको छ । तर, ११ वर्षमुनिका बालबालिकामा हालसम्म खोप प्रयोगमा नआएका कारण नेपालसम्म आइपुग्न लामो समय लाग्न सक्ने बताउँछन्, डा. शेरबहादुर पुन । उनी भन्छन्, ‘बच्चामा भ्याक्सिनको डोजबारे अझै निकै अनुसन्धान बाँकी छ ।
अध्ययनहरू पनि ट्रायलकै क्रममा रहेको र बच्चाको प्रतिरोधी क्षमताअनुसार खोपको प्रभावकारिताबारे समेत निकै शंका रहेका कारण तत्काल खोप लगाउन सम्भव देखिँदैन ।’हाल मोर्डना, फाइजर र बायोटेक कम्पनीले ५–११ वर्ष उमेरका लागि भ्याक्सिनमा ट्रायल गरिरहेका छन् । बायोटेक कम्पनीले भने ट्रायल सम्पन्न भइसकेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनको स्वीकृति लिन समय लिएको जनाएको छ ।
#बालबालिका # भ्याक्सिन